DVD Player maka Mavericks: Olee otú Play DVD on OS X Mavericks
> Resource> DVD> Olee otú iji Play DVD on OS X Mavericks
Mgbe emelite ka OS X 10,9 Mavericks na ha Mac, a ọtụtụ ndị hụrụ na ha DVD ọkpụkpọ kwụsịrị-arụ ọrụ. Eleghị anya, na DVD Player na-adịghị dakọtara na Mavericks. Ọfọn, ị hụtụla otu nsogbu? Ị na-enwe oké nkụda mmụọ mgbe i nwere ọchịchọ siri ike na-ele gị collection nke DVD fim ma DVD ọkpụkpọ na-adịghị arụ ọrụ? Isiokwu a ebe a na-enye gị abụọ surefire ngwọta ka ị na-egwu na-ele gị DVD on Mavericks mfe.
Part 1: Play DVD on Mavericks na Wondershare Player maka Mac
Part 2: Play DVD nkiri na Mavericks site n'ịtụgharị DVD
The Wondershare Player maka Mac bụ oké DVD ọkpụkpọ maka Mavericks. Ọ na-ekwe ka ị na na DVD fim na n'ụlọ DVD on Mavericks na elu mma. E wezụga DVD, ọ nwekwara ike igwu fọrọ nke nta ọ bụla ọzọ video na ọdịyo faịlụ Ọkpụkpọ, ọbụna media faịlụ dekọrọ na smartphone, camcorder, na wdg tụnyere ndị ọzọ Media Player, ọ na ihe otu ebe na playback na-erughị ewekarị okuku. Na n'elu nke, ọ dịghị achọ ukwuu nke gị CPU ebe nchekwa na N'ihi ya, agaghị ịdọrọ arụmọrụ nke gị Mac. Ọ bụ ihu ọma gị ezigbo mgbasa ozi ọkpụkpọ!
Part 2: Play DVD on Mavericks site n'ịtụgharị DVD
Ọ bụrụ na ị na-eji na mbụ DVD ọkpụkpọ na gị Mac na achọghị ịgbanwe ya, ị nwere ike họrọ iji tọghata gị DVD ka a Mac-akwado video format site na iji Video Converter Ultimate for Mac. I nwekwara ike na-ele gị converted DVD offline na n'ebe ọ bụla ị chọrọ dị ka na iPhone, PSP, Android ngwaọrụ na na.
1 mbubata gị DVD faịlụ ka a DVD Ntụgharị maka Mavericks
Ọ bụrụ na ndị DVD faịlụ na-adịghị ịchekwa na gị Mac, dị nnọọ itinye gị DVD diski n'ime DVD-akwọ ụgbọala. Mgbe ahụ, na-aga Njikwa menu ma họrọ Ibu Ibu DVD Files ... mbubata DVD faịlụ.
2 Họrọ otu kwesịrị ekwesị mmepụta format
Dị ka anyị maara, MOV bụ a QuickTime format, nke bụ n'ụzọ zuru ezu-dakọtara na Mac. Na ala nke a interface, ị nwere ike pịa format icon iji họrọ MOV si Video Atiya dị ka mmepụta usoro.
3 Play DVD on Mavericks site akakabarede
Pịa-acha anụnụ anụnụ nnukwu gburugburu bọtịnụ na ala-nri akuku nke window na-amalite converting gị DVD ka usoro ị chọrọ. Mgbe akakabarede, ị pụrụ ịchọta mmepụta faịlụ dị ka mmepụta faịlụ ndekọ. Ugbu a, ị nwere ike playback converted faịlụ na gị onwe gị DVD ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie ha, ị nwere ike tọghata ya na ọ bụ dakọtara maka iMovie, iDVD, Final Cut ma ọ bụ ndị ọzọ na-edezi software.